Myanmar Defence Weapons: တပ်မတော် (လေ)ရှိ အမောင်းသင်/အပေါ့စားတိုက်လေယာဉ် G-4
Designer Kyawzaw June 1, 2012 at 3:12 AM
ရိုမေးနီးယားက mig 21 lanceR C တွေက တော်တော်မိုက်တယ်ဗျနော်.
တရုတ်လေယာဉ်တွေအစားအဲဒါမျိုးတွေကိုရှာဝယ်တာကမှ ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်..တတ်နိုင်ရင်တော့ MIG 29,35 တွေများများဝယ်သင့်ပါတယ်. မစ် 29 တွေရဲ့ တိုက်စွမ်းရည်က ခုထိ အကောင်းဆုံးစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်နေပါသေးတယ်
sawkofan June 2, 2012 at 1:34 AM
SU-24 တွေက ဒီကောင်တွေထက်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ် သူက A-10 တွေပြီးရင် ပြီးပြည်စုံတဲ. မြေပြင်တိုက်ခိုင်ရေးလေယာဉ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်
sawkofan June 2, 2012 at 1:46 AM
Sorry SU-25 တွေကိုပြောတာဗျ http://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-25
Designer Kyawzaw June 3, 2012 at 8:18 PM
SU 24 တွေဝယ်မယ်ကြားတာ မ၀ယ်သေးဘူးလားဗျ..
JH-7 ရော ရောက်တယ်ကြားလား... J-11 တွေဝယ်မယ်ဆိုရင်ရောဗျာ
ဝေဟင်စိုး June 3, 2012 at 11:09 PM
Designer Kyawzaw June 4, 2012 at 2:54 AM
ဘာဖိုက်တာတွေဝယ်ထားတယ်ဆိုတာလေး ပြောကြပါအုံးဗျာ ဘာတွေထပ်ဝယ်မယ်ဆိုတာတွေပေါ့..ကျနော်ကတော့ mig တွေကိုကြိုက်တယ်ဗျ ဈေးလဲသိပ်မကြီးဘူး..တရုတ်ထက်လဲအများကြီးသာတယ်တော်..ကျနော့အထင်ပါ
nyanpwintaung February 20, 2013 at 5:48 AM
အကောင်းဆုံးကတော့ MIG တွေပဲဗျ။မြန်မာက ရှ၇ှားစက်တွေနဲကျွမ်းကျင်တယ်လေ ။သိပ်လေ.ကျ င့်ေ နစရာမလိုဘူးလိုလဲထင်တယ်ဗျ။အပေါ်ကနဲ သဘောတူတယ်ဗျ။